Bogga ugu weyn / blog / Waa maxay sababta qasabadda saxan ee jikada u sameysaa farqi
2020 / 11 / 09 Qoondayntablog 4718 0
Way adag tahay in la aqoonsado waxa kaa dhiman illaa aad u weecato mid ka mid ah tuubbooyinka jikada ee horumarsan. Waxaa jira noocyo badan, laga bilaabo firfircoonida taabashada ilaa qasabadaha dareeraha dhaqdhaqaaqa. Waxaad ku heli kartaa qasabad qasabadaha naqshado badan, oo xitaa waxaad heli kartaa buufis soo jiida ama soo jiida iyada oo aad doorbideyso aaladda wax lagu buufiyo.
Tubbada saxda ah waxay ka dhigi kartaa nidaamkaaga mid aad u dhib yar iyo waqtiga aad ku bixisid jikadaada oo aad u xiiso badan. Haddii aad u baahan tahay qasabad tayo sare leh, waa inaad had iyo jeer aqriso qiimeynta ka hor inta aanad wax u adeegan. Macaamiisha ayaa laga yaabaa inay labadaba xun yihiin oo ganaax furan yihiin wixii ku saabsan khibradooda alaabooyinka.
Haddii aad wax u iibsaneysid qasabadaha jikada ee saliidda lagu shiiday oo qiimahoodu gaarayo boqol doolar ama aad si fudud u raadineyso beddel ku habboon, dib u eegista ayaa kaa caawin kara. Tani waa habka ugu hanashada badan ee laguugu soo dhuujiyo qasabadda saxda ah. Maaddaama gabi ahaanba qof walbaa uusan xirfad ku lahayn qasabadaha jikada, waa qiimeyn ugu horreysa in la soo qabto tiro ka mid ah alaabtii aad dooneysay inaad raadiso. Halkan ka aqriso macluumaad dheeri ah oo kusaabsan arintaan ama madow matte hoos u soo jiido qasabadda jikada.
Awoodaha aad rabto inaad ku ogaato qasabadaada jikada cusub
Dhisida naxaas buuxa
Tani caadi ahaan maahan wax dhibaato ah illaa aad ka doorato tuubbo si macquul ah oo macquul ah loo qiimeeyo. Inta badan qasabadaha waxaa laga sameeyaa naxaas iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah inaysan mar dambe u xoqin sida biraha kala duwan markay biyaha taabanayaan. Tani waxay sii soconeysaa qasabadaada waqti dheer waxaadna heleysaa lacag dheeri ah lacagta aad qarash gareyso. Noocyo sida Delta, Moen, Kohler, Danze, iyo inbadan oo dheeri ah ayaa naxaas ugu adeegsada qasabadiisa ama keeda.
Tiknoolajiyaddii ugu dambeysay
Jiilka ugu dambeeya wuxuu la yimaadaa inta badan qasabadaha gaarka ah, laakiin shirkado yar ayaa gadaal gadaal uga dhacaya. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad heshay xilligii sida wanaagsan kuugu shaqeynayay. Haddii aad go'aansato qasabadda dareeraha dhaqdhaqaaqa, waxaad si fudud uga heli kartaa jikadaada. Si kastaba ha noqotee, maaddaama kuwani ay noqon karaan kuwo qiimo jaban, waxaad u baahan tahay inaad sidoo kale dib u soo celiso tiknoolajiyada taabashada maaddaama ay aad u eg tahay oo ay ka mid tahay faa'iidooyinka loo siman yahay.
Qeyb kale oo aad rabto inaad hubiso waa tiknoolajiyada waalka wanaagsan. Qaliinadu waa qaybaha noqon kara inta ugu badan ee lagu xidho qasabada jikada, iyo wakaalado yar sida Delta waxay bixiyaan teknoolojiyad damaanad qaadaya in qalabkaaga waara uu haysto cimri ka badan 5 milyan oo codsi. Qasabadaha badankood waxay isticmaalaan dhowr nooc oo ah qalabka dhoobada dhoobada laga sameeyo, sidoo kale waxaad u baahan tahay oo keliya inaad hubiso in loogu talagalay in lagu cimri dheeraysto.
Dammaanad iyo dammaanad
Dhamaadka iyo qasabada waa in lagu daboolaa iyada oo loo marayo hubin nololeed oo xaddidan, xaalad kasta oo kale waxaa laga yaabaa inaadan helin tuubbo la yaab leh. Qodobka xirida ee aad ubaahantahay waa inaad ku badashaa sanad ama laba sano. Tuubbooyinka qasabadaha waa inay xirnaadaan ugu yaraan 5 sano, waxayna kuxirantahay sida joogtada ah ee aad ugu xadgudubto, mana ahan inaad ka cabsato qiyaastii inaad badasho qasabadaada sanado badan.
Sida loo xakameeyo doorashadaada
Haddii aad eegto noocyo badan oo tubbada ah, waad ogaan kartaa waxa aad si daacad ah u jeceshahay iyo waxa aanad jeclayn. Dhammaantood ma wada yeeli doonaan wax siman oo mar dambe dhammaantood qasabadaha looma dhisayo isku mid. Noocyada qaarkood ayaa loo tixgeliyaa inay ka sarreeyaan kuwa kale, oo haddii aad rabto tan ugu fiican, waxaad si fiican u diyaar noqon doontaa inaad xoogaa lacag ah sameyso sababtoo ah xaqiiqda ah inaysan raqiis aheyn.
Si kastaba ha noqotee, isu-tanaasulka qasabada qiimaha jaban ayaa bixiya faa'iidooyin badan iyo wax soo saar aad u fiican. Waa inaadan ka walwalin ku dhowaad dhibicdan dhibta leh maadaama qasabadaha heerka koowaad lagu sameeyo iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad aan faleebo lahayn. Qeyb kale oo aad heleyso intaad xoogaa ka bixinayso qasabadda saxda ah waa awoodaha dheeraadka ah. Tani waxay ku lug yeelan kartaa waxyaabo badan oo kala duwan iyadoo ku xiran tuubada aad doorato.
Samee mid qumman oo aanad sida ugu fiican u soo qaadan qasabada ugu quruxda badan, hase yeeshee sidoo kale mid u muuqda mid fiican oo si sax ah u shaqeeya. Maaddaama aadan tijaabin karin marka hore, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inay si fiican u xiran tahay haddii aad samaysay doorasho aad u xun. Haddii aad barato dhaleeceynno hore goor hore, waxaad u yar tahay suurtogalnimada inaad xulasho qaldan ku sameyso qasabadda jikadaada cusub.
Hore:: 5 Waxyaabood oo Sameeya Qasabad Weyn oo Jikada wax loogu kariyo Next: Sidee loo beddelaa tuubbooyinka jikada?